न्यूज सञ्जाल: » प्रहरी महानिरीक्षकमा शैलेश थापा, उनका विगत र चुनौती ?
दक्षिण भारतमा शक्तिशाली तुफानले भारी वर्षा र तीब्र गतिमा हावा चल्दै
बिर्तामोड र शिवसताक्षीका दुई बृद्धको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु
साइक्लिङ क्रेज बढ्दाे, गन्तव्य झापादेखि इलामसम्म
९ अर्ब ४२ करोड पुँजी रहेको एनएमसीको १ लाख सदस्य पुर्याउने लक्ष्य
प्रहरी महानिरीक्षकमा शैलेश थापा, उनका विगत र चुनौती ?
न्यूज सञ्जाल २३ असार २०७७, मंगलवार २१:२०
काठमाडौँ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) शैलेश थापा क्षेत्री नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी)मा बढुवा भएका छन् । वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका क्षेत्रीलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो ।
महानिरीक्षक ज्ञवाली गएको माघ २८ गते आईजीपीमा बढुवा भएका थिए । ज्ञवालीको कार्यकाल कोरोना संक्रमण विरुद्धको प्रतिकार्य योजनामा खटिँदै गर्दा सकिएको हो । ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालमा खासै उपलब्धिपूर्ण काम नगरे पनि विवादास्पद निर्णय पनि उनको पालामा भएनन् ।
नवनियुक्त आईजीपी थापा सरकारले ३० वर्षे सेवाअवधि यथावत राखे २०७९ वैशाख १९ गतेसम्म सेवामा रहने छन् । थापाले २०४९ वैशाख १९ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन् । ५२ वर्षीय थापा प्रहरीभित्र व्यावसायिक अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् । थापाका एक समकक्षीका अनुसार फिल्ड कमाण्डमा भने उनी कमजोर अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् ।
सेवाको २८ वर्षसम्म उनले फिल्डमा भन्दा प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ९एकेडेमी०मा बिताएका छन् ।
यस्तो छ थापाको विगत:
उनी परिवारमा कान्छो छोरा हुन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि नै प्रहरी भएका कारण उनको रोजाइ पनि स्वभाविक रुपमा प्रहरी मै पर्‍यो । थापाका बुवा शम्भु थापा नेपाल प्रहरीबाटै डीआईजीमा अवकाश प्राप्त अधिकृत हुन् । उनका श्रीमति र एकछोरी छन् ।
२०५८ फागुन १० गते डीएसपी, २०६७ पुस २० गते एसपी, २०७४ साउन १९ गते एसएसपी, २०७५ असोज २८ गते डीआईजी र २०७६ चैत ९ गते एआइजीमा बढुवा भएका थापा सेवाअवधिमा लामो समयसम्म उपत्यकाभित्रै कार्यरत रहे ।
कतिपयले उनलाई ‘हाकिम रिझाएर काम गर्ने अधिकृत’का रुपमा पनि टिप्पणी गर्छन् । हुनपनि उनको यही स्वभावले सेवाअवधिको २८ वर्षमा ५ पटक प्रहरी महानिरीक्षककै सचिवालयमा रहेर काम गरे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, झापा, सल्यान र धादिङबाहेक उनले बाहिरी जिल्लामा बस्नु परेन ।
४ जना महानिरीक्षकसग ५ पटक सचिवालयमा बसेका थापा फिल्ड कमाण्डमा कम अनुभव रहेको उनीसगै सेवा प्रवेश गरेका अरु अधिकृतहरुको बुझाइ छ ।
यी हुन् आगामी चुनौती:
प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थापाका लागि भने आगामी दिन निकै चुनौतीपूर्ण छन् । २०७७ असार २५ देखि २०७९ वैशाख १९ सम्मको करिब २ वर्षे कार्यकाल रहेकोमा केहीमहिना भित्रै हुने संघीय संरचना अनुसार संघ र प्रदेशमा जनशक्ति समायोजन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ ।
एकात्मक प्रहरी संरचना कानुन अनुसार संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपछिको चुनौती सामना गर्न उनका लागि निकै कठिन हुने छ । समायोजन गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने असन्तुष्टि र संघ–प्रदेश संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर अघि बढ्नु उनका लागि अर्को चुनौती हो ।
सरुवा–बढुवामा देखिएको भनसुन र चाकरी प्रथाका कारण प्रहरीको व्यवसायिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संघ र प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्दा बढ्न सक्ने असन्तुष्टि र त्यसपछि सम्भावित राजीनामाको लहर रोक्ने चुनौती नयाँ महानिरीक्षक सामु छ । त्यतिमात्र होइन, संघीय प्रहरी सेवा ऐन समेत आएको छैन ।
ऐन नआउँदै जनशक्ति समायोजनमा गृह मन्त्रालयले गरेको हतारो, राजधानीको सुरक्षा र नेतृत्व प्रदेश कि संघीय सरकार मातहत राख्ने भन्ने विवाद, विशिष्ट प्रकृतिका कार्यालय सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा विस्तार गरेर त्यसलाई कानुनी हैसियतमै राख्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।
प्रहरीमाथि राजनीतिकरण, पेशागत मर्यादामाथि नै असर पुग्‍ने गरी हुने शक्तिकेन्द्रका अस्वभाविक चलखेल नियन्त्रण, पारदर्शी सरुवारबढुवामा जोड दिनुपर्ने चुनौती पनि नयाँ आईजीपी सामु देखिएको छ । प्रहरी ऐन र नियमावलीमै एसपी सम्मको सरुवा–बढुवा र खटनपटनमा प्रहरी महानिरीक्षक निर्णयक मानिन्छन् ।
तर, सिपाही सरुवारबढुवामा समेत प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, अन्य राजनीतिक दललगायत शक्तिकेन्द्रको चलखेल र दबाब हुँदा प्रहरीमा व्यवसायिक चरित्रमा दिनप्रतिदिन हृास आइरहेको छ ।
कतिपय अधिकृतहरु नै भ्रष्टाचार र अन्य जघन्य अपराधमा संलग्‍न हुने गरेका तथ्य सतहमै आइरहेका छन् । यसलाई समेत नियन्त्रण गरेर प्रहरीको समग्र व्यवसायिक चरित्रको विकास र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह आगामी दिनमा नवनियुक्त आईजीपी थापाका मुख्य चुनौती हुन् । कान्तिपुरबाट
११ मंसिर २०७७, बिहीबार ०८:१५
११ मंसिर २०७७, बिहीबार ०८:०९
१० मंसिर २०७७, बुधबार १८:३९
अर्जुनधाराको सुखानी खोलामा पुल बन्ने
१० मंसिर २०७७, बुधबार १८:०३
सीमा नाका खोल्न माग गर्दै काँकरभिट्टामा प्रदर्शन
१० मंसिर २०७७, बुधबार १७:५४
११ मंसिर २०७७, बिहीबार ०८:३१
११ मंसिर २०७७, बिहीबार ०८:२०
स्वास्थ्यकर्मीले मनाइन् क्वारेन्टाइनमा जन्मदिन (भिडियाे)
१५ श्रावण २०७७, बिहीबार १८:२७